Bixiyaha Gawaarida Gear dhimista xawaaraha darawalka hal wejiga
Wejiga dhimista mootada wejiga hal mar
Motors dhimista Gear
Ka hel khadka toosan Motors dhimista Gear Sogears
Noocyo badan oo kala duwan oo ah 110 volt ac gear motor motor phase one gear gearbox options.
Waxaan ku siineynaa qadar yare sare oo maareynta maareynta qadka si aad uhesho qiimaha ugu fiican .Baro wax ku saabsan ka shaqeynta mootada yareynta qalabka. Noocyo kaladuwan oo 110 volt ac gear matoor ah oo hal waji ah fursadaha gearbox matoor. matoorrada yareynta qalabka korontada, mashiinka yareynta qalabka korantada, xitaa 12 matoorrada dhimista qalabka korantada, sanduuqa yareynta qalabka korontada, dc matoorrada oo leh dhimista qalabka, Gearboodyada Warshadaha & Xawaareyaasha Xawaaraha ee iibka ah, Hel heshiisyada ugu fiican, waxaa loola jeedaa gerasyada cabbirka kala duwan. xawaaraha ama culeyska mootada.
Gawaarida xawaaraha dabacsan-xawaaraha
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, oo qiime jaban leh. Noocyo badan oo xulashooyinka matoorka ah. Gawaarida dhimista gawaarida ayaa sii kordhin kara korantada soo saarta matoorka.
AC Barbar Dhinac Saddexaad Gear Motor
Waxaan ku siineynaa 12V Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida, mashiinka gawaarida gawaarida sare leh oo leh qalab caalami ah iyo wixii la mid ah. AC Parallel usheeda dhexe Saddex waji Gear Motor 155 RPM.
Waxaan diyaar u nahay isla markaana sugeynaa iskaashigeenna. Helical-Dorm Gear Yaraanta xagal qumman ee xagalka moodeellada Rotisserie. Greartisan DC 12V 100RPM Gear Motor. 1 / 4 hp 230V Saddex Wajiga Model 4ZJ55.There sidoo kale waa xulasho wanaagsan ee matoorka DC. Kuwani sida caadiga ah waxaa loo adeegsadaa codsiyada gawaarida oo ay ku jiraan xakamaynta korantada gawaarida gawaarida, matoorrada wiishka daboolka, kuraasta korantada iyo daaqadaha korantada.
Aynu wada sheekaysanno hadda!
Maaddaama aan nahay soo saaraha gawaarida yareynta qalabka, waxaan siinnaa mashiinnada gawaarida ee loo yaqaan 'DC gearmotors' waxay u baahan yihiin ilaha tamarta batteriga waxaana loo isticmaalaa codsiyada xawaaraha isbeddelaya sida kuraasta curyaamiinta, sariiraha isbitaalka, wiishashka iyo miisaska caafimaadka, kuraasta awoodda, iyo kuwa kale. Laga soo bilaabo taxanaha gawaarida yar-yar ee cabbirka yar yar kaasoo leh awood-dhaqaaleedka 40W-15.5kW. nooca loo yaqaan 'Parallel-axis type reducer gear reducer' oo leh awood dhaqaaleedka 0.1kW-45kW.
Haddii aad haysato alaabada aad jeceshahay, kaalay oo nala soo xiriir! Waxaan diyaar u nahay oo aan rajeyneynaa iskaashigeena.Waxaan soo saareynaa qalab yareeyayaal si loo kordhiyo xadka & loo yareeyo xawaaraha culeyska matoorrada korontada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waad nala soo xiriiri kartaa, waxaan ku farxi doonnaa inaan ku caawinno!